Spiro: Ntinye Aka Ahịa Na-eji AI | Martech Zone
Spiro: Ntinye Aka Ahịa Na-eji AI
Tuesday, August 25, 2020 Wenezde, August 26, 2020 Douglas Karr
spiro utilizes keakamere ọgụgụ isi na-enye gị ahịa ndú ịghọta ihe na gị ahịa nnọchiteanya proactive na-atụ aro maka nzọụkwụ ndị ọzọ kachasị mma iji nyere aka gbochie ohere furu efu na dịkwuo ahịa arụpụtaghị.
Ndị ahịa Spiro na-akọ ụfọdụ nsonazụ dị ịtụnanya, gụnyere:
Ike ịchịkọta Oge 16 karịa data
Ike gị ma ọ bụ ndị otu egwuregwu gị iru 30% ọzọ atụmanya n’otu oge.
Ikike ime mechie 20% ọzọ ahịa amụọ
Uru nke Spiro Gụnyere
Spiro na-ewebata ụzọ ọhụụ maka akpaaka ahịa: proactive mmekọrịta management.
Lekwasị anya na mmemme ndị otu - Onye na-enyere Spiro aka na-enye ndị ọrụ usoro ndepụta nke AI na ọrụ ndị ọrụ na-arụ ọrụ na-ebuwanye ibu.
Mee ka otu na-arụ ọrụ - Wuru na-akpọ VoIP na AI na-emepụta aha ndị na-eme ka ndị otu nwee ike irukwu atụmanya, na ndekọ oku akpaghị aka na-abawanye arụmọrụ otu.
Gbaa mbọ hụ na njikọ aka - Spiro na-enye ihe ncheta na-agbaso usoro na-adabere na mkparịta ụka iji hụ na ọ nweghị nkwekọrịta ọ bụla gafere.
Mee ngwangwa ndibiat ọganihu - Spiro na-enyocha akara aka ma na-elekwasị anya na ohere ndị nwere ike imechi.
Mee ka mmeri dịkwuo elu - Spiro na-enye ọhụụ zuru oke na nghọta dị omimi iji nyere aka igbochi azụmaahịa efu.
Saleskọ ahịa ahịa - Spiro na-enye ọhụhụ zuru oke n'ime pipeline gị ma nyefee ọtụtụ nkwekọrịta aka iji melite izi ezi.
Spiro anaghị edochi ngwá ọrụ akpaaka ahịa (kama, ha na-ejikọta na ngwaọrụ ndị ahụ), mana ị nwere ike izipu ozi ịntanetị ahaziri na listi ezubere iche nke kọntaktị 500, yana ikike ịhazi ha maka oge na ụbọchị ga-eme n'ọdịnihu.
Hazie oge ngosi Spiro
Ekele pụrụ iche nye Sheryl na InetlọM maka ịchọta!
Tags: aikabinetdịkwuo amụọmmụba ahịa na-emechiọpụpụ ahịanjikọ ịkọ ahịa amụmaNkwado ire ahịantinye akaọrụ otu ahịaahịa otu arụpụtaghịOgwuVoIP
Na-ejide oge a na-enwetụbeghị ụdị ya iji gbanwee otú anyị si arụ ọrụ